युरोप3को ट्रकहरू एन्ड्रोइडका लागि एपीके डाउनलोड गर्नुहोस् [खेल] - लुसो गेमर
सिमुलेशन गेमहरू सिक्ने र ड्राइभिङ सीपहरूको लागि सबैभन्दा उपयोगी प्लेटफर्महरू मानिन्छ। यद्यपि अघिल्लो संस्करणहरूले कम गुणस्तरको प्रदर्शन र ककपिट भित्र अनुभव प्रदान गर्दछ। त्यसैले खेलाडीहरूको अनुरोधमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, हामी युरोप ३ को ट्रकहरूसँग फर्केका छौं।
वास्तवमा, हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्ने गेमिङ एप बिटा मानिन्छ। त्यो मौलिक रूपमा निर्माण चरणमा छ, तर यहाँ हामी एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूको लागि गेमप्लेको बिटा संस्करण ल्याउन सफल छौं। मूल Apk फाइल यहाँबाट पहुँच गर्न सकिन्छ।
यद्यपि, यहाँ हामी स्थापना र उपयोगका मुख्य चरणहरू सहित विवरणहरू उल्लेख गर्नेछौं। त्यसैले तपाइँ गेमिङ एपको स्थापना र उपयोग बारे जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ। त्यसपछि तल उल्लेखित चरणहरू सावधानीपूर्वक अनुसरण गर्नुहोस्।
युरोप3Apk को ट्रकर्स के हो
युरोप ३ एन्ड्रोइडको ट्रकर्स एक अनलाइन तेस्रो पक्ष समर्थित स्मार्टफोन सिमुलेशन गेमप्ले हो। जहाँ खेलाडीहरूले यो ठूलो अवसर दिए। आफ्नो ट्रक कम्पनी खोल्न र सामान र अन्य सामान ढुवानी राम्रो नाफा कमाउन।
हामीले यहाँ प्रस्ताव गरेको संस्करण तेस्रो हो। विगतका दुई संस्करणहरू सबैभन्दा सफल र त्यहाँ प्रचलनमा रहेको मानिन्छ। यद्यपि अन्य मुख्य विवरणहरू सहित ग्राफिक्स सजिलै सुधार गरिएको थियो। यद्यपि, एन्ड्रोइड गेमरहरूले थप नयाँ थपहरू सुझाव दिए।
यी सबै सुझावहरू प्राप्त गरेपछि, विशेषज्ञहरूले ट्रक सिमुलेशनको अन्तिम तेस्रो श्रृंखला सुरु गर्ने निर्णय गरे। जहाँ सबै सकारात्मक सिफारिसहरू यस अन्तिम संस्करण भित्र थपिनेछन्। ग्राफिक्स प्लस कुञ्जी सेटिङ ड्यासबोर्ड पनि छोटकरीमा सुधारिएको छ।
तसर्थ तपाईलाई यी सबै मुख्य सुधारहरू मनपर्छ र भित्र प्रिमियम ड्यासबोर्डको मजा लिन तयार छ थ्रीडी खेल। त्यसोभए तपाई केको लागि पर्खिरहनु भएको छ? यहाँबाट बिटा गेमप्लेको नवीनतम संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस् र अनन्त प्रो अनुभवको आनन्द लिनुहोस्।
नाम युरोपका ट्रकहरू ३
आकार 117.6 एमबी
विकासकर्ता वान्डा सफ्टवेयर
प्याकेज नाम com.WandaSoftware.TruckersofEurope3
जब हामीले गेमिङ एपलाई छोटकरीमा अन्वेषण गर्यौं तब हामीले यसलाई सुविधाहरूमा धनी पायौं। खेलाडीहरूलाई पनि युरोपेली देशहरूमा ट्रक चलाउने यो ठूलो मौका दिइन्छ। मिलान, प्राग, बर्लिन, जर्मनी, फ्रान्स, भेनिस र थप सहित।
अहिले सम्म ट्रेलर सहित विभिन्न ट्रकहरु सुधारिएको ट्राफिक एआई प्रणाली संग प्रत्यारोपण गरिएको छ। खेलाडीहरूले तुरुन्तै राम्रो नाफा कमाउन दिन रात काम गर्न सक्छन्। थप रमाइलो र यथार्थपरक अनुभवको लागि, धेरै ग्याजेटहरू प्रयोगयोग्य छन्।
जसमा फ्युल गेज, क्षतिको लागत, बटन, गियर, स्टेयरिङ, थ्रीडी भ्यू, सुधारिएको एआई र रियलस्टिक इन्जिन साउन्ड आदि समावेश छन्। कुञ्जी परिष्करण र व्यक्तिगत वस्तुहरूमा विस्तृत कार्यको कारण। गेमप्लेले यथार्थपरक अनुभव प्रदान गर्दछ जहाँ खेलाडीहरूले वास्तविक ड्राइभिङको आनन्द लिनेछन्।
हामीले पहिले नै बीटा पूरा गर्ने चरणको बारेमा कुरा गरेझैं प्रक्रियामा छ। यद्यपि, यो बिटा गेमप्ले पूरा गर्न थप समय लाग्नेछ। यसको मतलब आगामी केही महिनाहरूमा, प्रशंसकहरूले आधिकारिक स्रोतहरूबाट गेमिङ फाइलहरू पहुँच गर्न सक्षम हुन सक्छन्।
तर त्यसबेलासम्म हामी खेलका लागि बिटा संस्करण ल्याउन सफल छौं। याद गर्नुहोस्, ट्रकहरू र अन्य प्रो डिजाइनहरू अनलक गर्न, सिक्का चाहिन्छ। र ती केवल युरोप3बिटाका ट्रकहरू खेल्दै सेवाहरू प्रदान गर्न कमाउन सक्छन्।
खेल स्थापना एक यथार्थवादी खेल प्रदर्शन प्रदान गर्दछ।
जसमा फ्युल गेज, क्षतिको लागत र थ्रीडी दृश्य आदि समावेश छन्।
उच्च ओक्टेन इन्जिनहरू सहज ड्राइभको लागि उपलब्ध छन्
युरोपेली देशहरूमा ड्राइभ गर्नुहोस्।
दिन र रात चक्रको अर्थ हुन्छ।
एक विस्तृत इनडोर ड्यासबोर्ड थपिएको छ।
खेल इन्टरफेस गतिशील र आकर्षक छ।
युरोप ३ गेम बिटाका ट्रकहरू कसरी डाउनलोड गर्ने
हामीले माथि उल्लेख गरेझैं प्ले स्टोर र आधिकारिक स्रोतहरूबाट त्यस्ता कुनै पुरानो संस्करणहरू उपलब्ध छैनन्। तैपनि यहाँ हामी एन्ड्रोइड गेमरहरूको लागि मूल बीटा संस्करण प्रदान गर्न सफल छौं। नवीनतम Apk डाउनलोड गर्न तल दिइएको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्।
गेमरहरूको सुरक्षा र गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्दै, हामीले पहिले नै विभिन्न उपकरणहरूमा गेमप्ले प्रकाशित र स्थापना गरिसकेका छौं। गेमप्ले स्थापना गरेपछि, हामीले भित्र कुनै समस्या पाएनौं। त्यसैले चिन्ता नगरी गेमप्लेको आनन्द लिनुहोस्।
हामीले पहिले नै विभिन्न एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरूमा गेमिङ एप स्थापना गरिसकेका छौं। र गेमप्ले भित्र कुनै समस्या फेला परेन। यद्यपि, हामीले अनुप्रयोगको प्रतिलिपि अधिकार कहिल्यै धारण गर्दैनौं, त्यसैले यदि प्रयोग गर्दा केहि गलत भयो भने हामी जिम्मेवार हुने छैनौं।
हाम्रो वेबसाइटमा यहाँ धेरै अन्य सिमुलेशन सम्बन्धित गेमिङ एपहरू साझेदारी गरिएका छन्। ती पहुँचयोग्य सिमुलेशन खेलहरू अन्वेषण गर्न कृपया निम्न लिङ्कहरूमा क्लिक गर्नुहोस्। जो हुन् स्क्विड रोयाल खेल APK र ग्यास स्टेशन सिम्युलेटर APK.
तसर्थ तपाईंले सुरुदेखि नै युरोप श्रृंखलाका ट्रकहरू मन पराउनुहुन्छ। र अन्तिम संस्करण पहुँच गर्नको लागि अनलाइन प्रामाणिक स्रोत खोज्दै। त्यसपछि हामी ती एन्ड्रोइड गेमरहरूलाई युरोप3डाउनलोडको Truckers स्थापना गर्न सिफारिस गर्छौं। त्यो एक क्लिक विकल्पको साथ यहाँबाट पहुँच गर्न सकिन्छ।
विभाग सिमुलेशन, खेल ट्याग थ्रीडी खेल, युरोपका ट्रकहरू ३, युरोप3Apk को ट्रक, युरोप3बिटाका ट्रकहरू, युरोप3खेल बीटा को ट्रक मेल अन्वेषण